Restaurant Best Yurub Michelinguiden Guide 2019 | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Restaurant Best Yurub Michelinguiden Guide 2019
Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo(Last Updated On: 01/03/2020)
makhaayad Yurub guide Michelinguiden Best bixisaa bilowga weyn oo qorsheyneysa safar tareen Yurub a. guide Michelinguiden hadda dalabyo safra Yurub xulashada ah makhaayadda iyo hotels in 38 magaalooyinka Yurub. Saddex magaalo cusub ayaa lagu daray in this 2019 edition: Zagreb iyo Dubrovnik, Croatia iyo Revjavik, Iceland. Anonymous tababaray kormeerayaasha si ay u booqdaan dooro maqaayado halka codsanaya damaashaaday ah Michelinguiden nidaamka cuntada star-rating, oo ay isticmaalaan nidaamka la mid ah hotels. Natiijada: kala duwan oo ka mid ah shirkadaha ku talinayaa dhammaan dhadhankii iyo miisaaniyadda.
Socotada dareemi kartaa kalsooni ku tiirsan on Michelinguiden hanuunin sameeyaan safarka tareenka in kale oo badan delicious! Waxaan hoos ugu cidhiidhi ah hudheelka ugu wanaagsan Yurub guide Michelinguiden, iyo dabcan, caymis in stop kasta oo si fudud u yahay la heli karo by tareenka!
hudheelka ugu wanaagsan Yurub Michelinguiden Guide: Italy
Italy waxay caan ku tahay darsaday weyn ay u Caalamka of farshaxanka, naqshadaha, fashion, opera, suugaanta, design, oo film - liiska on tagaa, oo maba aannu soo sheegnay ku darsadeen in ay goobta makhaayad Yurub Best.
Uliassi, oo ku yaalla Senigallia xeebta Italy ee Adriya, ugu dambeyntii ayaa waxa uu muddo dheer la sugayay saddex xiddigood ka dib dhowr sano oo heer laba-star ah.
Sida laga soo xigtay blog makhaayad Lovers cuntada Fine. Orod by walaashay iyo kooxda walaalkiis Catia iyo Mauro Uliassi, makhaayadda dhigeysa diiradda culus on badda iyo bixisaa labada bedeley dhadhankiisu iyo cuntada ah oo la carte. Uliassi hadda waa mid ka mid ah sagaal kale three-star makhaayadaha ee Italy. Taas macnaheedu waa in dhammaan sannadkii hore three-star meelaha hayo xaaladooda, oo ay ku jiraan makhaayad Modena ka socdeen Osteria Francescana.
Waxaa jira badan oo tareenada madax for London waqtiyo kala duwan ee guud ahaan Yurub. Head in SaveATrain inay jartaan tikidhka ah daqiiqo oo ay ka soo fiiri diirdiir ugu fiican!
hudheelka ugu wanaagsan Yurub Michelinguiden Guide: Netherlands
Netherlands ayaa (ama Holland) waa wadan yar, iyo buuxaan walxood oo caan adduunka. beeraha rabarka Beautiful, Falkenberg, cheese suuqyada, alwaax kabaha, kanaalada ee Amsterdam, masterpieces ee Old Masters, Delft Blue earthenware, Hal abuur biyaha-maamulka iyo malaayiin baaskiilada. Oo baaskiilada ku mahad wanaag. Iyadoo 2019 Michelinguiden Guide for Holland isagoo wadar ahaan 571 maqaayado iyo 263 hotels. Aad ku socoto in ay u baahan tahay tababarka.
Hadda waxaa jira 89 maqaayado hal xiddigta leh ee total. At Derozario in Helmond, Jermain De Rozario saarata Lataliyihii gaarka ah ee cunnada ay Indonesian. at makhaayad Boqortooyada Tilburg, Paul Kappe sasabto cashooyin oo uu cunnada casri ah oo ay weheliso dhadhan aad u daran, sida Jeroen Brouwer at Loohoeve ah in Schoonloo iyo Thomas Van Santvoort at gabadh in Kerkdriel. Xooggii uu u dhadhan sidoo kale waa waxa lagu tilmaamay inventiveness ah la geeyay by Jim iyo Mike Cornelissen at Rijnzicht in Doornenburg, waana taxadir ah ee suxuunta bixiyo OONIVOO Uden. Waayo, kuwii ku caashaqi jiray oo cunto ku wanaagsan raaxada xeeran, Bougainville Amsterdam, iyo Voltaire in Leersum yihiin musts buuxda.
Amsterdam Central Station is the main train station and is the real heart of the city: dhexe ee ma aha oo kaliya by magaca, laakiin sidoo kale sida ugu weyn gaadiidka dadweynaha meel kala iibsiga, sidaa darteed waxa ay noqon doontaa meel fiican oo tareen sidoo kale.
hudheelka ugu wanaagsan Yurub Michelinguiden Guide: Spain
Madrid waa caasimadda ah ee Spain iyo ugu weyn degmada labada Community of Madrid iyo Spain oo dhan.
Waxay leedahay goobta suuqa cunto ah in ay jecel yihiin, laakiin makhaayadaha Michelinguiden Star ahayn kuwo si midkood seegi!
Madrid ku dhawaad 3,100 maqaayado, laakiin kuwo yar baa la doortay ayaa loo dhigay xiddigaha by caan ah Michelinguiden Guide. Waxaa jira 16 maqaayado in Madrid abaal xiddigaha Michelinguiden: DiverXO (saddex xiddigood); Santceloni, La Terraza del Casino, Sergi Arola, Ramon Freixa Madrid iyo El Club Allard (laba xiddigood); iyo Kabuki, Kabuki Wellington, DSTAgE, Albora, Ri iyo Punto MX (mid ka mid ah xiddiga). Intaa waxaa dheer, oo ku taal duleedka magaalada ka mid ah makhaayadda (qolof) waxay leedahay laba xiddigood iyo waxaa jira saddex maqaayado hal-star: Casa Jose, Chiron iyo Montia. Dhamaan iyaga ka mid ah u adeega cuntada heer caalami ah waxayna bixiyaan adeegyo aad u fiican.
The curiyay ee Kariyaha David Muñoz leeyihiin hudheellada wacdaro dunida oo dhan. Naaray, geesinimada iyo hal-abuur waa furaha guusha ee DiverXO. menu maqaayadan ay isu bedesho iyadoo xilli ciyaareedkan, laakiin kaliya waxay leedahay laba fursadaha. Menu XOW iyo Menu Glotón XOW. Labada bedeley ku bixiyaan cunto isku mid ah, and only vary in quantity and price.
Helitaanka jira: Habka ugu fiican ee si aad u hesho in ay qaado this of makhaayad Best Yurub waa by Metro ka dibna qaadan off in Tetuan Station (Line 1).
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit ah la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-european-restaurant-michelin%2F - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#michelin #michelinstar #thenetherlands Cuntada travelengland dalxiiska travelitaly travelnetherlands travelspain